Gedoonline | Author Archives
Aqriso Magacyadda Wasiir ku Xigeenadda iyo Wasiir Dowliyaasha Xukuumadda
Muqdisho-GMN-Markii Maanta kuln uu shir gudoominayey Ra’isulwasaraha Soomaaliya ay ku yeesheen Golaha Wasiiradda ay ku yeesheen Xaruunta Madaxtooyadda ayaa loogu dhawaqay Wasiiro Dowliyaasha Xukuumadda Soomaaliya iyo wasiir ku xigeenadda. Magacyadda Xubnaha lagu dhawaaqay ayaa waxaa ka mid ah: 1-Cabdi Farax sheekh C/qadir W/dowladaha madaxtooyada 2-Dr Maxamed Nuur Gacal W/dowlaha arrimaha dibada 3-Mahdi Maxamuud Cali W/dowlaha [...]
R/wasaaraha Soomaaliya oo soo dhameystiray golaha wasiirrada
Muqdisho-GMN-Kulan ay maanta isugu yimaadeen golaha wasiirrada Soomaaliya ayaa loogu dhawaaqay wasiirro ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya. Kulanka maanta ka dhacay xafiiska R/wasaaraha Soomaaliya oo uu shir guddoomiyayay R/wasaaraha xukuumadda Cabdi Faarax Shirdoon ayaa lagu dhameystiray dhismaha xubnaha golaha wasiiradda Soomaaliya. Shirka maanta ay yeesheen wasiirrada Soomaaliya oo ah mid todobaadle ah ayaa waxaa ka qeyb [...]
Madaxwaynaha Iyo Gudoomiyaha Barlamaanka Jabuuti oo kulmay
Muqdisho-GMN-Madaxwaynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa Maanta xafiiskiisa ku qaabilay Gudoomiyaha Barlamaanka Jabuuti oo maalin ka hor soo gaaray Magaaladda Muqdisho. Idiris Cali Guddoomiyaha Barlamaanka Jabuuti iyo Madaxwaynaha ayaa ka wada hadlay garab istaaga Walaalaha Jabuti ee Soomaaliya. Gudoomiyaha Barlamaanka Jabuuti ayaa kulanka ka dib waxa uu gaaray Dekadda Magaaladda Muqdisho. Mr Idiris ayaa u sheegay Madaxda [...]
Shabaab iyo Dowladda oo ku dagalamay Goobwayn
Kismaayo-GMN-Wararka Maanta oo Khamiis ah laga helayo Magaaladda Kismaayo ayaa sheegaya in dagaal khasaare geystay uu ka dhacay Deegaanka Goob-wayn ee Gobbolka Jubbadda Hoose. Wararka waxaa ay sheegayaan in dagaalkan oo goordhow dhacay uu gaystay qasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay. Saraakiil katirsan kuwa maamulka KMG ah ee Kismaayo ayaa [...]
Burcadbadeed iyo Puntland oo dagaalamay
Gaalkacy-GMN-Ciidamadda maamulka Puntland ayaa Magaaladda Gaalkacyo ka bilaaway la dagaalanka kooxaha burcad badeeda Soomaalidda. Inta hawlgalka uu socday ayaa la sheegay inay jireen iska hor imaadyo dhexmaray Ciidamadda Puntland iyo kooxaha Burcad badeeda Soomaalidda. Goob jogayaal ku sugan Magaaladda Gaalkacyo ayaa Gedoonline u sheegay in iska hor imaadka labada dhinac uu ka dhashay khasaare isugu [...]
Waxyaabaha qarxa oo lagu arkay Xaafadda Islii
Nairobi-GMN-Wariyaal ku sugan Xaafada Islii ee Magaaladda Nairobi ayaa Gedoonline u sheegay in Ciidamadda ammaanka Kenya ay gacanta ku dhigeen waxyaabaha qarxa. Ciidamadda Kenya ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay dadkii watay waxyaabaha qarxa kuwaas oo ahaa Soomali. Saraakiil ka tirsan Dowladda Kenya ayaa sheegay in baaritaano ay ku hayaan dadka ay qabteen kuwaas oo [...]
Dagaal ka dhacay Duleedka Magaaladda Jowhar
Jowhar-GMN-Ciidamadda Dowladda iyo kuwa Al-Shabaab ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dagaalameen duleedka Magaaladda Jowhar. Dagaalka ayaa ka danbeyey markii kooxo la rumaysan yahay in Shabaab ay ka tirsan yihhiin weerarka ay ku soo qaadeen duleedka Jowhar. 2-ka mid ah dhinacyadii dagaalamay ayaa geeriyootay halka tiro intaa ka badana ay ku dhawacmeen kuwaas oo [...]
Shabaab oo ka hadlay xilka Madaxwayne Faroolle
Muqdisho-GMN-Saraakiil ka tirsan Xarakadda Shabaab ayaa ka hadlay xilka Madaxtinimo ee Madaxwaynaha Maamulka Puntland Cabdiraxmaan Faroole. Afhayeenka Cali Maxamuud Raage ayaa sheegay in Madaxwayne Faroole uusan doonayn inuu ka dego xilka. Cali Dheere ayaa tilmaamay in Faroolle uu doonayo inuu sii hayo xilka uu ku dhibaateynayo sida uu yiri dadka Muslimka ah eek u nool [...]
Ciidamadda Dowladda Oo isku faafiyey Jowhar
Jowhar-GMN-Wararka laga helayo saaka Magaaladda Jowhar ayaa sheegay in Ciidamadda Dowladda Soomaaliya ay isku faafiyeen xaafadaha Magaaladda Jowhar. Ciidamadda ayaa halkaasi ka wada hawlgallo ay ku doonayaan in ay gacanta ugu soo dhigaan kooxo hubeysan oo qaraxyo ka geystay Magaaladaasi. Dadka deegaanka ayaa Gedoonline u sheegay in ilaa hada indhahooda ay ku arkeen in ka [...]
Dhega badan oo sheegay in Gobboladda la isku furayo
Jowhar-GMN-Cabdikariin dhega badan Taliyaha abaanduulaha ciidamadda xooga dalka Soomaaliya ayaa sheegay in Dowladda Soomaaliyeed ay isku furi doonto guud ahaan gobboladda dalka Soomaaliya. Dhega badan ayaa intaa hadalkiisa raaciyey in meelaha hada qorsheysan ee la isku furayo ay ka mid tahya Muqdisho iyo Boosaaso. “Ma jiraan wax na hakinaya in aan gaarno guud ahaan Gobboladda [...]
Page 1 of 549123Next ›Last »	Search in Archive